बाबुरामको प्रश्न : रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचिराख्ने यो कस्तो न्याय/लोकतन्त्र हो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
बाबुरामको प्रश्न : रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचिराख्ने यो कस्तो न्याय/लोकतन्त्र हो ?
प्रकाशित मिति : 2020 September 17, 9:12 am
काठमाडौं, १ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता, सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अत्यधिक जनमतले चुनाव जितेका रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचिराख्ने यो कस्तो न्याय/लोकतन्त्र हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भट्टराईले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले चुनाव हारेकलाई संविधानको मर्मविपरित जस्केलाबाट छिराएर सांसद मन्त्री बनाउने तर अत्यधिक जनमतले जितेकालाई जोल कोचिराख्ने ? भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । उनले रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । हेरौं भट्टराईले के लेखेका छन? :
चुनाव हारेकालाई संविधानको मर्म विपरित जस्केलाबाट छिराएर सांसद (+मन्त्री?)बनाउने तर अत्यधिक जनमतले जितेका रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचिराख्ने यो कस्तो न्याय/लोकतन्त्र हो?विमान अपहरण,झापा विद्रोह,जनयुद्ध,मधेस विद्रोह इ.राजनीतिक क्रान्ति हुने तर थारू विद्रोह अपराध?#ReleaseReshamChaudhary